i-CSA iqinisekisa uhlelo lohambo le-Pakistan
eGoli: i-Cricket South Africa (CSA) iyajabula ukumemezela ukunwetshwa kohambo kuvakasha i-Pakistan kwimidlalo emfushane ezophetha ihlobo lwama-Proteas lemidlalo yezizwe.
Uhambo luhlelelwe kusukela u-Ephreli 02 kuyela ku-Ephreli 16, 2021, iqembu lakwi-subcontinent lizofika eNingizimu Afrika ngo-Mashi 26 ngaphambi komdlalo wokuqala uma bengena kwi-bio-secure environment (BSE) e-Gauteng.
i-Pakistan Cricket Board (PCB) ivume isicelo esenziwe i-CSA ukudlala eminye imidlalo yama-Twenty20 International, okusho ukuthi uhambo selizoba nama-Betway One Day International (ODI) amathathu nama-KFC T20Is amane azodlalwa e-Centurion, e-SuperSport Park nase-Goli e-Imperial Wanderers Stadium.
“Siyakujabulela ukuthi sesiyakwazi ukuqinisekisa izinsuku kanye nohlelo oluphelele lohambo lebhola elimhlophe le-Pakistan iza eNingizimu Afrika,” kuphawula i-CSA Director of Cricket, u-Graeme Smith.
“i-Pakistan ifakazele isimo sabo eminyakeni njengeqembu eliyingozi kwimidlalo emfushane futhi ngiyaqiniseka ukuthi bazonika ama-Proteas isivivinyo kwi-Highveld. Sizophinde sibe ne-‘Betway Pink ODI’ ekade ilindelekile kuhambo futhi yinto engaphinde ilindelwe abadlali, abalandeli kanye nalaba ababalwa kulolusuku olukhulu.”
“Siyayibonga i-PCB ngokuvumelana nesicelo sethu esikhathini esifushane ukunweba ubude bohambo ngokunezezela nge-T20 yesine, okuzosinika isikhathi esidingekayo semidlalo yamazwe.”
i-PCB Director of International Cricket, u-Zakir Khan enezezela: “Kuyasijabulisa ukusiza izwe eliyilunga njengathi kwimizamo yalo lokusinda. Kusemahlombeni ethu sonke ukugada umdlalo kanye nenhlalakahle sihlangene njengamalunga e-ICC.”
“Ubudlelwana phakathi kwe-South Africa ne-Pakistan yinde futhi ihlonishwa ndawo zombili, futhi kube isinqumo esilula sokuvumelana nesicelo sabo. Sonke sibheke uhambo oluyimpumelelo.”
Imidlalo emithathu ye-ODI series ihlelwe ukuqala ngo-Ephreli 2 e-Centurion, umdlalo wesibili – i-Betway Pink Day – ihlelwe ukudlalwa eGoli ngo-Ephreli 04. Umdlalo wokugcina uzodlalwa ngo-Ephreli 07 e-Centurion.
Lokho kuzolandelwa i-T20I series, imidlalo yokuqala embili ihlelwe ukudlalwa ngo-10 no-12 Ephreli e-Wanderers, kulandele imidlalo embili yokugcina ngo-14 no-16 Ephreli e-SuperSport Park.
Ama-Proteas ahlulwe nokho u-Markram ethole ikhulu u-Linde, u-Markram no-VD Dussen banike ama-Proteas ithemba e-Rawalpindi Ama-spinners anika ama-Proteas ithemba Izinti ezinhlanu zika-Nortje ukuhola ukulwa kwama-Proteas osukwini lesibili i-Cricket Australia imemezela ukuhoxa kuhambo lwase-SA Izinti ezinhlanu zika-Nauman zinqobele i-Pakistan i-Test okokuqala u-Rabada ukhiphe inti yesi-200 ngaphambi kokuthi izinti selishonile zihlukumeza ama-Proteas Ikhulu lika-Fawad lishiya ama-Proteas ngemuva u-Rabada uhole ukuqeda kangcono njengoba ama-Proteas ezibuyisele e-Karachi u-Klassen uzoba ukapteni weqembu lama-Proteas lama-T20 eliya e-Pakistan Izinti ezintathu za-Sipamla zisiza ama-Proteas anqobe kahle